တေးရေးဆရာတှကေို တနျဖိုးမထားတတျရငျ အဆိုတျောမလုပျနဲ့ဆိုတဲ့ တေးရေး တေးဆို ဗြူဟာ… – Shwewiki.com
တေးရေးဆရာတှကေို တနျဖိုးမထားတတျရငျ အဆိုတျောမလုပျနဲ့ဆိုတဲ့ တေးရေး တေးဆို ဗြူဟာ…
သမီးရှငျသီခငျြးနဲ့ ပရိသတျတှရေငျထဲကိုရောကျလာတဲ့ ဗြူဟာကတော့ လူငယျပရိသတျတှေ ရဲ့အားပေးမှုအပွညျ့အဝရထားတဲ့ Hip Hop အဆိုတျော တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ ။
ကိုယျတိုငျဖွတျသနျးလာတဲ့ ဘဝအတှအေ့ကွုံတှကေို လူငယျတှအေတှကျ Sharing လုပျပေးတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှေ အမြားကွီးကို ရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ ။
တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ပရိသတျတှသေိပျမသိသေးပမေယျ့ ဆယျကြျောသကျလူငယျတျောတျောမြားမြားကတော့ ဗြူဟာရဲ့ သီခငျြးတှကေို အားပေးကွလို့ လူငယျတှကွေားမှာရပေနျးစားတဲ့ အဆိုတျောလညျးဖွဈပါတယျ ။
အဆိုတျော ဗြူဟာက ကိုယျတိုငျရေးသားသီဆိုသလို တခွားအနုပညာရှငျတှအေတှကျလညျး သီခငျြးလေးတှေ ရေးပေးလရှေိ့ပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ ဗြူဟာက ရှနေဲ့သီခငျြးအပျရငျ ရှဖွေဈမယျ့သီခငျြး ၊ ရေးပေးတယျ ၊ ငှနေဲ့သီခငျြးအပျရငျ ၊ငှဖွေဈမယျ့သီခငျြး ၊ရေးပေးတယျ….
လနေဲ့သီခငျြးအပျရငျ၊ လေ အဖွဈနဲ့ ပဲသီခငျြး ရေးပေးလိုကျတယျ၊၊ တနျရာတနျရာပဲ ၊၊ ဂီတလောကထဲမှာတေးရေးဆရာတှကေို တနျဖိုးမထားတကျရငျ ၊ အဆို တျော မလုပျ နဲ့ လို့သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျက နေ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။
ပရိသတျတှကေတော့ ဗြူဟာရဲ့ အနုပညာအပျေါ တနျဖိုးထားတဲ့ စိတျလေးကို လေးစားကွောငျးမှတျခကျြတှရေေးသားထားကွသလို အနုပညာကို တနျဖိုးမထားဘဲ ပေါ့ပေါ့တနျတနျ သီခငျြးအပျတဲ့ သူတှကေိုလညျး ရှုံ့ခပြွောဆိုထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ ပရိသတျတှရေော အနုပညာရှငျတှေ ရော တေးရေး တှကေိုတနျဖိုးထားနိုငျကွပါစေ နျော ။
ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ.။
သမီးရှင်သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ ဗျူဟာကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝရထားတဲ့ Hip Hop အဆိုတော် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို လူငယ်တွေအတွက် Sharing လုပ်ပေးတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေ အများကြီးကို ရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပရိသတ်တွေသိပ်မသိသေးပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တော်တော်များများကတော့ ဗျူဟာရဲ့ သီချင်းတွေကို အားပေးကြလို့ လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့ အဆိုတော်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုတော် ဗျူဟာက ကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုသလို တခြားအနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်း သီချင်းလေးတွေ ရေးပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ဗျူဟာက ရွှေနဲ့သီချင်းအပ်ရင် ရွှေဖြစ်မယ့်သီချင်း ၊ ရေးပေးတယ် ၊ ငွေနဲ့သီချင်းအပ်ရင် ၊ငွေဖြစ်မယ့်သီချင်း ၊ရေးပေးတယ်….
လေနဲ့သီချင်းအပ်ရင်၊ လေ အဖြစ်နဲ့ ပဲသီချင်း ရေးပေးလိုက်တယ်၊၊ တန်ရာတန်ရာပဲ ၊၊ ဂီတလောကထဲမှာတေးရေးဆရာတွေကို တန်ဖိုးမထားတက်ရင် ၊ အဆို တော် မလုပ် နဲ့ လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်က နေ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေကတော့ ဗျူဟာရဲ့ အနုပညာအပေါ် တန်ဖိုးထားတဲ့ စိတ်လေးကို လေးစားကြောင်းမှတ်ချက်တွေရေးသားထားကြသလို အနုပညာကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သီချင်းအပ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း ရှုံ့ချပြောဆိုထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေရော အနုပညာရှင်တွေ ရော တေးရေး တွေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ နော် ။
ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်.။
ဂပြနျက မှာထားတဲ့ အရုပျလေးတှအေဖွဈ Music Video မှာ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ရဲလေးနဲ့ မိစန်ဒီ…